Dell XPS 13 2-in-1 (2021) ongororo: Achiri anoshanduka tenzi?
Iyo Dell XPS 13 2-in-1 yanga iripo kwenguva yakareba zvekuti inoonekwa seyakasvibira laptop yakatevedzana. Iyo XPS 13 ine yakazara kupeta-kunze hinge. Unogona kuisimudzira munzvimbo ye "tende", kuimisa senge-mumubhedha mini TV, kana kuishandisa senge laptop. Makuru epasirese ekusimudzira e2021 ese ari pamusoro pekufambira mberi kwakaitwa neIntel. Iyo Dell XPS 13 2-in-1 ine imwe yeIntel's Xe mifananidzo chipsets. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Dell XPS 13 2-in-1 (2021) ongororo: Achiri anoshanduka tenzi?
HP Pavilion malaptop akagadziridzwa neIntel's 11th-gen processor uye mapurasitiki akachengetedzwa
HP yatanga mhando dzakazorodzwa pasi pePavilion mutsetse wemabhuku eIndia. Mhando nyowani dzinosanganisira iyo Pavilion 13, Pavilion 14, uye Pavilion 15 ese ayo anofambiswa neIntel's 11th-chizvarwa Tiger Lake processors neIris Xe mifananidzo. HP inotaura zvakare kuti iyo nyowani-nyowani ndeye yekutanga kambani mutengi kabhuku kemabhuku iyo inoshandisa kushandiswa kwemashure-kwevatengi-yakadzokororwa uye… [Verenga zvakawanda ...] nezve HP Pavilion malaptop akagadziridzwa neIntel's 11th-gen processor uye mapurasitiki akachengetedzwa
VAIO Inotarisa Kudzoka Kwayo Iine $ 3,579 Yakazara Carbon Fiber Laptop
Kweanoda kusvika makumi maviri emakore, Sony VAIO yakaburitsa mamwe emakomputa ane mukurumbira, anoyevedza, uye anodhura. Ikozvino, iyo mhando iyo yakakudzidzisa iwe kuti unzwe "laptop godo" iri kubuda kunze kwekurega basa neyakagadziridzwa, izere kabhoni fiber VAIO Z mureza. Iyo nyowani VAIO Z inodada mukunyanyisa kugadzikana, huremu hwekutanga hwe2.11 mapaundi, uye (mune yakajairwa VAIO fashoni) $ 3,579 kusvika $ 4,179 mutengo… [Verenga zvakawanda ...] nezve VAIO Inoratidzira Kudzoka Kwayo Iine $ 3,579 Yakazara Carbon Fiber Laptop
Iyo nyowani VAIO Z ndiyo yepasi rose laptop ine matatu-mativi akaumbwa akazara kabhoni muviri dhizaini
VAIO Corporation nhasi yakazivisa iyo itsva VAIO Z, yekutanga pasi rose laptop ine matatu-dimensional akaumbwa akazara kabhoni muviri dhizaini. Iyo yakaumbwa kabhoni fiber zvinhu inoita kuti iyi laptop ive yakasarudzika uye yakaoma. Sezvinotarisirwa, laptop iyi inofambiswa neiyo 11th Gen Intel Core i7 H-series processor, Intel Iris Xe Graphics, inosvika 32GB RAM uye inosvika 2TB PCIe SSD. Zvimwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyo nyowani VAIO Z ndiyo yepasi rose laptop ine matatu-mativi akaumbwa akazara kabhoni muviri dhizaini
ASUS ZenBook Flip S (UX371) Ongororo: Iyo isingaremi 2-in-1 Laptop izvo zvese nezve zvinoonekwa.
ZenBook Flip S neASUS yakatangwa kupera kwegore rapfuura seimwe yeanonyanya kupa premium mutengi zvinopihwa kubva kukambani. Iine 4K OLED pani, iyo 2-in-1 Laptop inotsvaga kukwikwidza neanofarira eDell XPS 13 2-in-1 pamwe neiyo HP Specter x360. Muchokwadi, iyo ZenBook Flip S inoita kunge inotaridzika zvakanyanya senge HP's Specter dzakateedzana chii neyakaguma rima rinowedzeredzwa nekupenya… [Verenga zvakawanda ...] nezve ASUS ZenBook Flip S (UX371) Ongororo: Iyo isina kureruka 2-in-1 laptop ndeye zvese zvinoonekwa.
HP Sporter 13 x360 ongororo: Slim uye yakajeka superstar
Spectre is the name given to HP's top-end style laptops. They tend to be some of the most eye-catching around, but have never quite reached the level of public recognition as the Dell XPS 13 or MacBook Pro. There's no downside to this mild under-appreciation for us buyers when they turn out as well as the 2020 Spectre 13 x360, though. This 13-inch laptop is slick, … [Verenga zvakawanda ...] nezve HP Specter 13 x360 ongororo: Yakatetepa uye yakajeka nyeredzi